5G नेटवर्कले कस्तो बनाउँछ भविष्य ? जान्नुहोस् | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more 5G नेटवर्कले कस्तो बनाउँछ भविष्य ? जान्नुहोस्
5G नेटवर्कले कस्तो बनाउँछ भविष्य ? जान्नुहोस्
जेठ २७ गते, २०७६ - १५:०५
काठमाडाैं । पछिल्लो पुस्ताले हरेक कामको नतिजा छिटो चाहन्छन् र जीवनशैली पनि त्यस्तै बनाउँदै लगेका छन् । उनिहरुलाई घण्टामा हुने काम मिनेट अनि मिनेटमा हुने काम सेकेण्डमा चाहिएको छ । इन्टनेटको माध्यमबाट यस्तो चाहना सम्भव पनि हुँदै गएको छ । 4G ले हाम्रो जीवनलाई धेरै सजिलो बनाएको थियो । यस्तोमा यदि 5G नेटवर्क आयो भने सोच्नुहोस्, भविष्य कस्तो होला ?
यो कुरा जान्न आवश्यक छ 5G केहो ? 5G लाई हामी इन्टरनेट दुनियामा पाँचौ पींढी पनि भन्छौं । यो आएसँगै इन्टरनेटको स्पीड मात्रै बढ्दैन् यसले दुनियामै ठूलो क्रान्ति ल्याउँदैछ । अब सवाल मानिसहरुको जीवन नै पुरै बदल्ने 5G नेटवर्क नेपालमा कहिले आउँछ ?
5G नेटवर्कबाट तपाई फोटो, भिडियो वा कुनै खालका डाटा १० गुणा उच्च स्पीडका साथ ट्रांसफर गर्न सक्नुहुन्छ । उदाहरणको लागि एक हाई डेफिनेशन फिल्म जसलाई तपाई 4G नेटवर्कमार्फत डाउनलोड गर्दा १० मिनेट लाग्छ भने 5G नेटवर्कमार्फत डाउनडोल गर्दा केहि सेकेण्डमा नै डाउनलोड हुन्छ । यसको बाहेक तपाई घरमा जति इन्टरनेट डिभाईस प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसको बदला यो धेरै फास्ट चल्नेछ ।
5G नेटवर्कमार्फत हाई डेफिनेशन वाला भिडियो कुनै रुकावट विना अनलाइनमा चल्नेछ । यसको बाहेक तपाईं अनलाईन गेम खेल्नुहुन्छ भने अनलाईन गेम हाई स्पीडका साथ खेल्न पाउनुहुनेछ ।
5G आएसँगै तपाईंको घर पनि स्मार्ट हुन जानेछ । यसको प्रयोग गरि तपाईं आफ्नो सेक्यूरिटी सिस्टम, लाईटिंग र अन्य उपकरणहरुको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ । बताइएअनुसार, यदि तपाईंको घरमा फ्रिजको एसी अन छ तपाईंलाई मेसेज आउनेछ । तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन मार्फत फ्रिजलाई बंद या अन गर्नसक्नुहुनेछ ।
जीवनको दिशा नै बदल्नेवाला 5G नेटवर्कको मानिसहरु एकदमै पर्खाइमा छन् । यसले नेटवर्कको दुनिया पुरै बदल्नेछ । चाहे घर, गाडी या अफिस पुरै नयाँ हुनेछ ।
जेठ २७ गते, २०७६ - १५:०५ मा प्रकाशित